बाढीप्रभावित क्षेत्रमा विद्युत सुचारु कहिले हुन्छ ? « Tulsipur Khabar
बाढीप्रभावित क्षेत्रमा विद्युत सुचारु कहिले हुन्छ ?
लक्ष्मण विश्वकर्मा,तुलसीपुर ३ भदौ । तुलसीपुर क्षेत्रका केहि ठाउँमा अझै विद्युत सेवा सुचारु हुन सकेको छैन । अविरल वर्षा पछि आएको वाढिले विद्युतिय संरचनामा क्षति पुराएपछि विद्युत अझै सुचारु हुन नसकेको हो । क्षति भएको कतिपय ठाउँको मर्मत गरी सेवा सुचारु भएता पनि कतिपय ठाउमा एक साता पुगिसक्दा पनि सुचारु हुन सकेको छैन ।
तुलसीपुर १३ को बखरिया,रनियापुर ,मजघटुवा ,वराहखुटी सिमलखुटी र ढकनामा विगत ८ दिन देखी विद्युत सेवा अवरुद्ध हुदै आएको स्थानिय वासीले बताएका छन् । विद्युत सेवा अवरुद्ध हुदा कुटानी, पिसानी, मोवाईल चार्ज लगाएत विद्युतीय मार्फत हुने सम्पुर्ण कामहरु ठप्प भएको छ । विद्युत सेवा अवरुद्ध हुदा उपभोक्ताहरु मर्कामा परेका छन् भने सम्वन्धित निकायबाट मर्मत कार्य ढिला सुस्ती भएको स्थानियले गुनासो गरेका छन् ।
यता विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र शाखा तुलसीपुरका प्रमुख टंकराज गिरीले धेरै जसो ठाउमा मर्मत कार्य सम्पन्न भई विद्युत सेवा सुचारु भएको बताउनु भएको छ । साथै केहि ठाउमा मर्मत कार्य भईरहेको हुदा अझै केहि समय लाग्ने बताउनु भएको छ । सवै भन्दा वढि ढकनामा समस्या भएकाले त्यहा विद्युत लाईनको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सके मात्र विद्युत सेवा सुचारु गर्न सकिने उहाले बताउनु भएको छ ।
बबई नदि र तुईखोलाको छेउमा विद्युत पोल गाड्ने ठाउँ सम्भव नभएकाले अन्य ठाउबाट विद्युत लाईन विस्तार गर्नुपर्ने उहाको भनाई छ ।
प्रकाशित मिति : २०७४ भाद्र ३ गते शनिवार